News – Shwe Likes
သှယျလလြှနျးပွီး မွငျသူ တိုငျး စှဲမကျေ လာကျစေ တဲ့ အလှ တရားတှေ နဲ့ ရငျခုနျနှုနျးတှေ မွနျဆနျ သှားစမေယျ့ စုလှိုငျဝငျး ရဲ့ VIDEO လေး
Shwe | November 22, 2020
အမိုကျစား ကောကျွေ ကာငျး အလှတရား တှကွေောငျ့ ပုရိသေ တှရဲ့ အသညျး တဈခုလုံးကို ညှို့ယူဖမျးစား ထားသူလေးကေ တာ့ မျောဒယျ စုလှိုငျဝငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ အကကရတာကို ဝါသနာပါလှနျးသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ Cover Dance လေးတှေ ကိုလညျး အမွဲလိုလို တငျပေးနသေူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါ တယျ။ သူမရဲ့
မိမိုကျလှ နျးတဲ့ ပုံစံေ လးတှေ နဲ့ အသဲယား စရာကောငျးေ လာကျတဲ့ မပေ နျးခြီရဲ့ ဗီဒီယိုလေးမြား
မပေနျးခြီ ကတော့ အမိုကျစား ခန်ဓာကို ယျနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိ တဲ့မကျြနှာ ကို ပိုငျဆိုငျထားတာေ ကွာငျ့ အမြိုးသား ထုကွီးရဲ့ဝနျး ရံအားေ ပးခွငျးကို ရရှိထား တဲ့အနုပညာရှငျတဈယော ကျပါ။ ကိုယျပိုငျ အရညျအခငျြးအွ ပညျ့နဲ့ အနုပညာေ လာကမှာ နရောတဈခု ရလာသူဖွဈပါတယျ သရုပျဆောငျပို ငျးမှာ ဆိုရငျလညျး အပွဈပွောစရာ
ညို့အားပွငျး တဲ့ အလှတရားတှနေဲ့ ပုရိသတှေ ကို ရငျခုနျသံတှမွေနျအောငျ ဖမျးစားလိုကျပွနျတဲ့ ခြိုဇငျဝငျးပွညျ့
သှယြ လတွဲ့ အမိုကစြား ခနျဓာကို ယလြေးကို ပိုငဆြိုငထြား တဲ့ ဆကဆြီ မောဒြယလြ ခွိုဇငြ ဝငြးပှညြ့ ကိုသိကှမယြ ထငပြါတယြ။ ဆှဲမကဖြှယရြ ငသြပရြှုေ မာစရာ အမိုကစြား ပုံရိပလြေးေ တှနဲ့ ပုရိသတှေ ရဲ့ရငကြို ဆှဲဆောငြ ညို့ယူထားတဲ့ အလနြးစား မောဒြယသြရုပဆြောငလြေးဖှဈပါတယြ။သှယလြွ ပှပှဈေတဲ့ ခနျဓာကိုယနြဲ့အတူ လှပကှညလြငတြဲ့
ဗီဇပြောင်း ခြောက်မျိုးလောက် ကွဲထွက်နေ တဲ့ COVID 19 နှင့် သတိထားဖို့ လိုနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယလှိုင်း
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ် ဆိုး ဒုတိယ လှိုင်းလာနေပြီနော် ခြောက်မျိုးလော က်ထဲမှာ အဆိုး ဆုံးကို သင် ရင်မဆိုင်ရနို င်ဘူးလို့ မပြောနိုင်တာကြောင့် ဒီအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထား ကြရအောင် !!! ရာစုနှစ် အတွင်း တုန်လှု ပ်ခြောက်ခြားဖွယ် ကပ်ရောဂါ ကိုရိုနာ(ခ) Covid-19 ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့
တစ်ချိန်တုန်း က စည်းလုံးစွာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယား နိုင်ငံ နှစ်ပိုင်းကွဲ သွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
Shwe | July 15, 2020
ကိုးရီးယားနို င်ငံဟာ ဆိုဗီယက် နဲ့ အမေရိကန် ပြည်ေ ထာင်စု တို့ရဲ့ အားပြိုင်ပွဲ စစ်အေးတိုက် ပွဲမှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ထိခိုက်ခဲ့ရြ ပီးနောက် နှစ်ပိုင်းကွဲသွားခဲ့ တာ နှစ် ရဝ လောက်ရှိေ နပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပိုင်းကွဲ မသွားခင်က ကိုးရီးယားကျွန်းဆွယ်ဟာ တစ်ခုတည်းသော စည်းလုံးတဲ့ ကိုးရီးယား နိုင်ငံ
ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ (၁၇)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ထီ တိုက်လို့ရပါပြီ…..ထီပေါက်စဉ် စ/ဆုံး update လုပ်ပေးသွားမယ်နော်
Shwe | July 1, 2020
မင်္ဂလာပါ … (၁၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ထွက်ပါပြီ …. Update လုပ်ပေးနေပါသည်။ Like လုပ်ထားပေးပါ ခင်ဗျာ ၁.၇.၂၀၂၀ သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု – ည ၈၅၃၀၉၅ သိန်းတစ်သောင်းဆု – ဖ ၇၈၇၃၅၄ သိန်းငါးထောင်ဆု- ဃ ၈၄၇၉၃၀ ၊ ဓ ၄၀၆၈၂၀ သိန်နှစ်ထောင်ဆု –
ကုန်းဘောင်ခေတ် ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ပြည့်တန်ဆာ ဆိုတာ ဘယ်လို မျိုးလဲ
Shwe | June 17, 2020
ရှေးမြန်မာ ဘုရင်ေ ခတ်မှာ ပြည့်တန် ဆာလုပ်ငန်းက တရားဝင် ရှိခဲ့တယ်။ အနီးဆုံးကု န်းဘောင်ခေတ် ကိုပြောရရင် ပြည့်တ န်ဆာအိမ်ဆိုတာ အထင်အရှား ရှိသလို လူအ များခွဲခြားလွယ်အောင်လဲ သတ်မှတ်ချက်ေ တွရှိပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာအိမ်ရဲ့မျက်နှာစာမှာ တပေပတ်လည် အဖြူအနီကြား တင်းတိမ်(လိုက်ကာ) ကိုချထားရတယ်။ ပြီးရင် ကွပ်ပျစ်ကုတင်ချပြီး အဲ့အေ ပ်ါမှာ သနပ်ခါး၊ကျောက်ပျဉ်၊
ကမ္ဘာမြေကြီး အတွက် နိမိတ်ကောင်းတွေ ပေါ်လာတော့ မှာပါ…
နိမိတ်တွေ အရင်လာပြီ ခုနောက်ပိုင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ထောက်ခံလာတဲ့ ကမ္ဘာကျော်တွေ အများကြီးတွေ့လာရတယ်…. ဟိုးယခင်ကတည်းက သိနေကြပေ မဲ့ စီးပွားရေး လူမူ့ရေး စတဲ့ မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေရှိလို့အားလုံးထုတ်ဖေါ်ဖို့ဝန်လေးနေကြပုံရတယ်… အခု ကပ်လည်းဆိုက်ရော ဘယ်သူမှ အားမနာတော့ဘူး တကယ်တမ်း ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ဘာသာကိုတညီတညွတ်တည်း ထုတ်ဖေါ်နေကြပြီ…. ကဆုန်လပြည့်နေ့ကလည်း ကုလသမဂ် ဂအတွင်းရေးမူးချုပ်နဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီတို့